Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Matheus Pereira Storymụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Ihe omuma anyi nke Matheus Pereira na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ndu ezinulo, nke bara uru, nwunye na ibi ndu.
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, anyị na-akọ akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ na ndụ onye egwu egwu bidoro malite na nwata rue mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Ee, onye ọ bụla maara banyere nnukwu ọrụ aka ya na anya maka ịgafe. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ akụkọ ndụ Matheus Pereira bụ nke na-akpali akpali. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Matheus Pereira Storymụaka Akụkọ:
Maka ndị na - ebido ebido, aha ya bụ Perry. Matheus Felipe Costa Pereira mụrụ na 5th ụbọchị nke May 1996 n'obodo Belo Horizonte na Brazil. Amuru ya na nne ya, Viviana na nna ya, Alexandre.
Ezigbo ezinụlọ Matheus Pereira:
Onye na-awakpo egwuregwu ahụ bụ ezigbo onye obodo Brazil. Nsonaazụ nyocha emere iji chọpụta agbụrụ Pereira na-egosi na ọ bụ agbụrụ agbụrụ Portuguese. Agbụrụ agbụrụ na-achịkwa ihe ka ọtụtụ na Brazil.
O yikarịrị ka ọ si n'ógbè Portuguese na-asụ asụsụ Brazil. Foto: IG & Pinterest
Ọ bụ ezie na a mụrụ winger na Brazil, ọ bụ na Portugal ka o tolitere. Ezinụlọ ya kwagara mba Europe ọtụtụ afọ gara aga mgbe Brazil nwere nsogbu akụ na ụba.
N'agbanyeghị nke ahụ, Pereira nwere ncheta obi ụtọ banyere Brazil. Otu n'ime ha na-ahụ n'anya football dịka onye ọrịa nọ n'ụlọ ọgwụ. Ọ gwara WBA na:
“MGBE A NA-EGO EGO, M DERE PNEUMONIA MAGH TO EME IWU N’ỌBỌCH H. NNA M chọrọ ka m lekọta m anya, ya mere o wetara m na bọọlụ. Nke ahụ bụ MGBE Ọ Mụtara na m nwere oke ngafe maka egwuregwu. Otu Ubochi, Anyi na-egwu egwu n'ime ulo ogwu HOSPITAL CORRIDORS MGBE MGBE NA windo nke di nso gbawara. ND ST ỌR G HLỌ ​​ỌROS HLỌ ỌR G NA-EGO NA US. ”
Mgbe nke ahụ gasịrị, Pereira na-echeta ịgba bọl n'okporo ámá nke Belo Horizonte na ụmụaka ndị jiri akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ ha mee ihe mgbaru ọsọ.
Matheus Pereira Ezigbo Ezinụlọ:
“Perry” nwekwara ike icheta ibi n’otu ọmarịcha ụlọ na Brazil. Nna ya nwere ezigbo ọrụ dịka onye na-ere ụgbọ ala ebe mama ya bụbu onye nwe ụlọ. Na nkenke, ezinụlọ biri ndụ ntụsara ahụ ma chọọ ịchekwa ọnọdụ otu ahụ mgbe mbugharị.
Matheus Pereira Football Akụkọ:
Mgbe ha rutere Portugal, nne na nna winger wuru ụlọ ọhụrụ ha na nso Lisbon. Mgbe nke ahụ gasịrị, nne Pereira laghachiri Brazil iji kpọrọ ya na ụmụnne ya anọ rute mba Europe.
N'oge na-adịghị anya nwata ahụ dị afọ iri na abụọ malitere ịgba bọl na Trafaria, klọb dị nso na Lisbon. You maara na ọ bụ na Trafaria ka Pereira nwetara nkwanye iji sonyere usoro ndị ntorobịa nke Sporting CP?
Foto a na - adịghị ahụkebe nke midfielder n'oge ọ bụ nwata na-agba bọl.
Mgbe Sporting CP, ihe egwuregwu bọọlụ nwere oke ịrị elu site n'ọkwá ruo mgbe ọ mere mmalite ya maka ndị otu mbụ ha na oge 2015-2016. Mgbe ọ dị afọ 19, Pereira anọghị na-egwuri egwu mgbe niile na klọb nwata. N'ihi ya, ndị Portuguese gbazinyere ya na klọb atọ maka ebumnuche nke ime ihe mbụ.
Akwụkwọ akụkọ Matheus Pereira - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
E zigara GD Chaves na mbinye aka na-ebuso onye na-egwu egwu egwu. O nwere otu ihe magburu onwe ya na ụlọ ọrụ Primeira Liga, na-atụle ihe mgbaru ọsọ asaa nke egwuregwu na ọhụụ asatọ iji nyere ha aka ịkwụsị ọnọdụ nke isii.
Ọ nwere oge dị egwu na-egwu GD Chaves. Foto: Instagram.
Otú ọ dị, ntinye ego ọzọ nke Pereira na FC Nürnberg bụ ngwakọta nke mmeri na ọdachi. O nwetara nkwuputa nke mmadu nke gunyere nhoputa maka Bundesliga Rookie nke onyinye oge. N'ụzọ dị mwute, mgbalị ya ezughị ka akụkụ German merụrụ ahụ site na njedebe nke ikpeazụ na tebụl.
Akwụkwọ akụkọ Matheus Pereira - Bilie Iji Mara Aha Akụkọ:
Mgbe e zigara Pereira na West Bromwich Albion na mbinye ego, ọ maara oge iji kwụsị ịkwụsị mbufe ego ya dị nso. N'ihi ya, ọ rụsiri ọrụ ike ịkwado onwe ya na akụkụ Bekee ma nyere ụlọ ọrụ ahụ aka ịkwalite Premier League.
Ọgba ya nke ezigbo ụdị na ewu ewu mere ka ọ merie ndị na-akwado Player of the Season Award. Ya mere, Throstles egbughị oge ọ bụla n'ịkpalite okwu nrụpụta nke hụrụ Pereira kwupụtara dị ka onye ọkpụkpọ Albion na August 2020. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Thalyta? - Nwunye Matheus Pereira:
Afọ 24 (dika Septemba 2020) na alụm di na nwunye. Aha nwunye Matheus Pereira bụ Thalyta. Ha zutere 5 afọ gara aga ma bụrụ ndị na-enweghị ike ịgụta ọnụ kemgbe ahụ. Thalyta abughi nani nwunye Matheus Pereira kama ezigbo enyi ya!
Matheus Pereira na nwunye ya Thalyta. Foto: IG.
Ọ na-achọpụta na o nwere ezigbo ezumike ma na-ahụ maka okwu azụmahịa ya. Ihe ọzọ bụ na ọ na-aga egwuregwu ya. Onye winger na-ewere onwe ya dị ka onye nwere ihu ọma ịchọta ya. Ha ka di na nwunye ka di na nwunye, ha amaghikwa umu.
Matheus Pereira Ndụ Ezinụlọ:
Enweghị ụzọ anyị nwere ike isi kwuo maka akụkọ ndụ winger n'ekwughị ezinụlọ ya. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna Matheus Pereira na ụmụnne ya. Ọzọkwa, anyị ga-ewetara ụmụnne ya na ndị ikwu ya ihe ga-enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma.
More na Matheus Pereira nna:
Nna winger bụ Alexandre. Anyị kwuburu na ọ bụ onye na-ere ụgbọ ala na Brazil. Ọ bụkwa onye na-anụ ọkụ n'egwuregwu bọọlụ na-akwado ụlọ ọrụ Belo Horizonte - Atletico Mineiro tupu ọ kwaga Portugal.
Matheus Pereira ya na nna ya Alexandre: Foto: IG
Mgbe Alexandre biri na Portugal, ọ malitere ire igwe TV maka Sky iji bulie ezinụlọ ya. Nna na-akwado nkwado nke na-agakarị egwuregwu Pereira, n'agbanyeghị ebe dị anya, na-enwe obi ụtọ banyere onye nwa ya nwoke ghọrọ.
Banyere Matheus Pereira nne:
Viviana bụ nne nke na-awakpo midfielder. Ọ bụ onye nwe ụlọ na Brazil ma were Job dị ka onye na-ehicha ihe iji nyere aka gbakwunye ego ezinụlọ na-enweta mgbe ha kwagara Portugal.
Matheus Pereira na nne ya, Viviana. Ebe E Si Nweta: IG.
Banyere Matheus Pereira na ụmụnne ya:
Onye nwere nku nwere ụmụnne 4 ndị ọ ka ga-ekpughe. Otu n'ime nna nna ya - Urbano Bonifacio da Costa bụ nwoke kit na masseur na Atletico Mineiro club na Belo Horizonte, Brazil.
Matheus Pereira ya na nna ya na ndi ezinulo ya amaghi. Ebe E Si Nweta: IG.
Enweghị ndekọ banyere nne nne nne ụmụ ama ama. N'otu aka ahụ, a chọpụtabeghị nwanne nna ya, nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya na nwanne nwanne ya. O nwere nwa nwanne nne akpọrọ Davy ma na-ebunye ya foto na gram.
Matheus Pereira na nwa nwanne nna Davy. Ebe E Si Nweta: Gram.
Matheus Pereira Ndụ nke Onwe:
Ka anyị kwuo banyere ndụ Perry na football. E nwere ihe atọ na-akọwa onye ọ bụ n'èzí egwuregwu ahụ. Ha gụnyere ịdị umeala n'obi ya, ịdị njikere ịmụta na ịdị njikere ikpughere eziokwu banyere ndụ ya na nke onwe ya.
Usoro ihe omume ya kwa ụbọchị gụnyere ọrụ, izu ike, iri nri, ihi ụra. N'èzí usoro ndị ae kwuru n'elu, Pereira nwere mmasị ịga njem, soro ndị ezinụlọ na ndị enyi na-ezukọta yana izu ike n'akụkụ anụ ahụ.
Matheus Pereira Web site:
Ndị ọgba bọọlụ nọ n'ime egwuregwu ahụ maka agụụ yana nnukwu ego ọ na-ewe. Na 2020 ọ bịanyere aka na nkwekọrịta ya na West Brom Albion nke ga-ahụ ka ọ na-akwụ ụgwọ ego kwa afọ nke £ 312,000. Ya mere, a na-atụle atụmatụ ya iji dekọọ ịrị elu meteoric site na, 18,620 ruo ọtụtụ narị pound n'ime afọ ndị sochirinụ.
Perry nwekwara ego na-aghọgbu ya site na nkwado na nkwado. Agbanyeghị, ọ kababeghị n'àgwà ya iji gosipụta akụ na ụba ya na-eto ngwa ngwa. Yabụ, ọ dị ụkọ ịhụ foto ya ka ọ na-agbada n'akụkụ ụgbọala ndị mara mma ma ọ bụ na-enwe ntụsara nke ụlọ okomoko.
Eziokwu gbasara Matheus Pereira:
Iji kechie akwụkwọ akụkọ a na-atọ ụtọ nke winger, nke a bụ obere amachaghị ma ọ bụ eziokwu banyere ya.
Eziokwu # 1 - Matheus Pereira's Salary Breakdown and Erite Per Seconds:
Kwa Afọ £ 312,000
kwa ọnwa £ 26,000
Kwa Izu £ 5,991
Kwa .bọchị £ 856
Kwa elekere £ 36
Kwa Nkeji £ 0.6
Sekọnd £ 0.1
Nke a bụ ihe Matheus Pereira akwụla ụgwọ kemgbe ịmalitere ile Bio.
Eziokwu # 2 - Matheus Pereira Religion:
Pereira bụ onye kwere ekwe na-eme Kristianị. N'ezie, o nwere njikọ siri ike na ụka ụka a maara dị ka Igreja Evangelica Pentikọstal. Mgbe a nabatara West Brom na Premier League, Pereira mere nkwalite na uwe elu nke gụrụ, “Abụ m nke Chineke.”
Eziokwu # 3 - Matheus Pereira Profaịlụ:
Ndị na - agba ọsọ bọọlụ nwere ogo 76 n’ihe nwere ike iri isii na asatọ. Aghotara na onye egwu egwu a anoghi ogologo oge na klọb kwesiri iru ogo. Ogologo oge ya na West Brom ga-enyere ya aka karịa ọkwa ya ugbu a.
Ọ nwere ntụle dara ogbenye mana nwa oge. Ebube: SoFIFA
Eziokwu # 4 - Ọrụ Mba Nile:
Ọ bụ ihe na-awụ akpata oyi n’ahụ ịmata na Pereira họọrọ ịnọchite anya Portugal kama ịnọ na Brazil, obodo amụrụ ya. N'ịkọwa ihe kpatara nhọrọ ya, onye midfielder kwuru na:
“EKWEERE m na ọnọdụ m bụ BRAZILIAN ma obi m bụ nke PORTUGAL. Ọ B IN N’ INLỌ ỌH THER EUR NT THATP EUR ND THAT M THATR HAVE M KWES EURR HAVE NKE MB HAVE. PORTUGAL ji bụrụ mba egwuregwu, mana ha bụ otu n’ime ndị kacha mma. Na-egwu ha? Otu narị pasent. ”
Aha n'uju Matheus Felipe Costa Pereira
Ụbọchị ọmụmụ Thbọchị 5 nke Mee 1996
Ebe amụrụ onye Obodo nke Belo Horizonte na Brazil
Egwuregwu Ackwakpo Midfielder / Winger
Ndị nne na nna Viviana (nne), Alexandre (nna).
omume ntụrụndụ ime njem, isoro ndị ezinụlọ na ndị enyi nọrịa yana izu ike n'akụkụ anụ ahụ
Rygwọ ọnwa kwa afọ £ 312,000
Ngwakọta Net £ 18,620
Daalụ maka ịgụ ihe a na-ede na Matheus Pereira. Anyị nwere olile anya na o sitere n'ike mmụọ nsọ mee ka ị kwenye na nkwekọ na-emeri ihe niile, dịka Pereira jigidere ụdị ọfụma ọ bụla ọbụlagodi mgbe ọ na-egwu egwu maka iyi egwu na-atụ egwu FC Nürnberg.
Hụla ihe ọ bụla na - adịghị mma n’isiokwu a? Mee ka anyị mara na ngalaba nkọwa.